आरएमडीसी लघुवित्तको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कम्पनीको आधारभूत तथा प्रविधिक विश्लेषण | आर्थिक अभियान
आरएमडीसी लघुवित्तको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कम्पनीको आधारभूत तथा प्रविधिक विश्लेषण
असार २, काठमाडौं । बिहीवार आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ७७० कायम भएको छ । यो मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।
बिहीवार कम्पनीको २ हजार ५५९ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ । यस कम्पनीको संस्थापक शेयरधनी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक रहेका छन् ।
त्यसैगरी संस्थापक शेयरधनीमा नेपाल बैंक, अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम वाशिङ्गटन, एनआईसी एशिया बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एभरेष्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक, नेपाल बङ्गलादेश बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, लुम्बिनी विकास बैंक, प्रुडेन्सियल क्यापिटल, एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक र अन्य संस्थापकहरु रहेका छन् ।
कम्पनीको शेयर संरचना संस्थापकको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत रहेको छ । यस कम्पनीको अध्यक्षमा सुजता जोशी रहेकी छिन् । त्यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्योति चन्द्र ओझा रहेका छन् ।
कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. २६ करोड ५९ लाख खुद नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्मको तुलनामा ५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत आवमा कम्पनीले रू. १७ करोड ५३ लाख खुद नाफा कमाएको थियो ।
चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले जगेडामा रू. १ अर्ब ३ करोड र रिटेण्ड अर्निङमा रू. ९६ करोड ४३ लाख सञ्चित गरेको हो ।
कम्पनीले आव २०७७/७८ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस शेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । २० प्रतिशत बोनस शेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब २४ करोड पुगेको छ ।
बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत समेत भइसकेको छ ।
५ वर्षको लाभांश इतिहास :
कम्पनीको ५ आवको वित्तीय स्थिति रकम (रू. हजारमा) :
५ वर्षको नाफा चार्टमा :
मैनबत्ती चित्र :
मार्च २० २०२२ १६ जुन २०२२
५९ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा लामो पुच्छर भएको हरियो मैनबत्ती आकृती बनेको छ । यस्तो आकृती कम्पनीका शेयरमूल्य आगामी दिनमा बढ्ने संकेत देखाउँछ ।
५९ दिनको कारोबार अवधिमा आरएसआई ३० दशमलव ७१ विन्दुमा रहेको छ । यो ओभरसोल्ड जोनमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा विक्री चाप रहेको देखिन्छ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन :
५९ दिनको कारोबार अवधिमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन १० दशमलव ९६ विन्दुमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ । कम जोखिम युक्त र पूर्वानुमान गर्न सजिलो छ । लाभ पनि न्यून हुन सक्छ ।
मुभिङ एभरेज :
हालको शेयरमूल्य ७ दिने र १४ दिने एक आपसमा नजिकिन खोजेका छन् । याी दुई रेखाभन्दा हालको शेयरमूल्य तल रहेको छ । यस्तो अवस्थामा ७ दिने रेखाले २६ दिने रेखालाई तलबाट काटेर माथि गएमा शेयरमूल्य बढ्ने गर्दछ भने २६ दिने रेखामा प्रतिरोध पाएर फर्किएमा मूल्य घट्ने देखिन्छ ।
बिहीवारको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ७७० देखि महँगिएमा रू. ८०५ मा प्रतिरोध पाउने र सस्तिएमा रू. ७६१ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
(यद्धपि हामीले उपलब्ध तथ्याङ्कको अधारमा गरेको विश्लेषण आफैमा पूर्ण होइन, लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व कम्पनीको समग्र आधारभूत पक्ष र प्राविधिक पक्ष हर्नु आवश्यक रहेको छ ।)